ikhaya Kutheni Amabali Omntwana
Senza amabali ebhola ebuntwaneni ukugcina abalandeli benolwazi ngamabali ngabadlali ababathandayo. LifeBogger Ithatha awona manqaku asemagqabini, othusayo kunye anomdla malunga neenkwenkwezi zebhola ngokubhekisele kumaxesha abo ebuntwaneni ukuza kuthi ga ngoku. Nantso into esiyiyo!
Wonke umntu kwiplanethi yomhlaba unembali yobuntwana kunye nabadlali bebhola abahlukileyo kwiiplanethi ezingaphandle. Kwaye azitshintshi ngezinto ezinamandla amakhulu kunye nobuchule bobugqi. Ngokwenene bangabantu abanokutsala imvelaphi yabo kookhokho basemhlabeni.
Ke, njengabo bonke abantu, abadlali, abaphathi nababekekileyo kwezemidlalo banamabali obuntwana anika iinkcukacha ezinomdla nezixhokonxayo kweziganeko ezisusela kwiminyaka yabo yokufikisa kubuntwana ukuya kwinqanaba lokufikisa.
Iinkcukacha ze-Lifebogger eziphawuleka ngeziganeko zobuntwaneni zabadlali bebhola, abaphathi kunye nabaphathi. Ukusuka kwi-LR: UVan Dijk, Luka Modric, Kylian Mbappe, Zinedine Zidane kwaye Aleksander Ceferin. IiCredits zemifanekiso: LB.
At I-Lifebogger, sibeka amabali obomi bokuqala angabalulekanga obalulekileyo kwiimbali ezinomdla esibonisa ngazo ngabadlali bebhola, abaphathi kunye nabantu abadumileyo kwihlabathi liphela.
Isizathu sokulandela lo msebenzi mhle kangaka kukuba negalelo kwisabelo sethu ekuphuculeni umdlalo webhola, sikhumbula ukuba iintlungu zobomi bokuqala, ukuzuza kunye nokudibana kwabadlali bebhola, abaphathi kunye nabantu abadumileyo abazukubonelela nje ngezifundo ezibaluleke kakhulu Ubomi kodwa onomdla kubo abo baqala nje uhambo lwabo.
Amabali eendaba okanye amabali ayinyani ebhola ekhatywayo abalulekile kubathandi bebhola abancinci phakathi kwezinye izinto. Ityala lemifanekiso: I-GhHeadlines.
Ngamafutshane, eli nqaku lijolise ukunika abaphulaphuli bethu umbono ogqibeleleyo wento esiyiyo ngokunikezela ngeziganeko zobomi babadlali bebhola ekhatywayo, abaphathi kunye nabantu abadumileyo phantsi kwezihloko ezinomdla ezikhethwe kakuhle, ezibhalwe ngokucacileyo nangokucacileyo.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola ekhatywayo kunye nabaphathi ababezelwe bengamahlwempu
Ezinye iingcungcu zebhola ekhatywayo kunye nabantu abadumileyo bazalwa bengamahlwempu, abanye abazuzanga nto, kwaye abanye basebenzela ukuzisusa kubuhlwempu. Nokuba yeyiphi na yeziganeko ezamehlelayo, intlupheko yayiyeyona nto yayiqhubayo ekhokelela kumgqakhwe odumileyo kumabali obutyebi ebholeni.
I-7 yeeleta engafundekiyo neyoyikayo ichaza ubomi kunye nokunyuka Cristiano Ronaldo, ikhutshwe eyona ingene ngaphakathi Luis Suarez, kananjalo ayizanga ibe nokuqaqamba; Roman Abramovich kwaye UGianni Infantino kodwa yenziwe UGabriel ' Ukunyuka kuya kudumo olukhuthaza izigidi zabantwana abahlwempuzekileyo eBrazil.
Ukubandezeleka kodwa uncumo, uCristiano Ronaldo, uLuis Suarez, uGianni Infantino noGabriel Jesus babetsala nzima ebomini. IiCredits zemifanekiso: LB.
Intlupheko yaba sisikhuthazo esinamandla nangona besikhathazekile kwaba bhuthi. Ngombulelo, umdlalo weBhola waba sisixhobo sabo sokuphucula iimeko zabo zemali.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola ekhatywayo kunye nabaphathi ababezelwe baba zizityebi
Kwicala lokugungxula, iqela lebhola enobukrelekrele kunye neqela eliphakamileyo lazalwa likhulu, ezinye zinezipuni zesilivere kwaye ezinye zinamacwecwe edayimani. Ngenxa yoko, baba nesiqalo esihle ebomini kwaye babephila ngaphaya kwendlela yentlupheko.
Ukuthandwa kwe Aleksander Caferin kwaye Michel Platini babexhotyiswe kwangoko ngenkxaso abayidingayo ukuze baphile ubomi obukhulu ngelixa ibingabadlali bebhola ekhatywayo Mario Gotze, Andrea Pirlo kwaye Gerard Pique babengengobasemzini kubutyebi ngaphambi kokufumana udumo.
U-Mario Gotze, uGerard Pique kunye no-Andrea Pirlo bazalelwa kwiintsapho ezityebileyo. IiCredits zemifanekiso: LB.
Amabali obuntwana - Abadlali bebhola abaye basinda eMfazwe nakwiiRots njengoBantwana
Ibali lokukhula kwenani labanye abadlali bebhola ekhatywayo alinakubaliswa ngaphandle kokutsala abalandeli ngohambo oluchukumisayo lweemfazwe zamakhaya kunye neziqhulo ezinokuthi zibasuse abadlali zibekho.
Ukujonga kubomi bokuqala bokuzalwa kweNigeria Victor Moses Isixelela ngemiphumo emanyumnyezi yoqhankqalazo eNyakatho yeNigeria, kunjalo nje UJuan Cuadrado kwaye Serge Aurier ube neenkumbulo zovuyo zobundlobongela kwisixeko saseColombia eNecocli kunye naseIvory Coast ngokwahlukeneyo.
UJuan Cuadrado ngomnye wabadlali bebhola abambalwa abasindileyo kwiimfazwe kunye neziqhulo ngexesha lobuntwana. Ityala lemifanekiso: LB.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola ekhatywayo babeza kubhubha besengumntwana
Kudala ngaphambi kokuba azi malunga nomdlalo webhola, u-Diego Costa wayenamava amabi aphantse enza ubomi bakhe.
Kwenzeka into embi ngelo xesha iCosta yayineenyanga nje ezintandathu ubudala. Ushiywe ngumama wakhe owahamba wayohlamba izitya. U-Costa omncinci walala phantsi kwimatrasi kwigumbi lakhe lokulala engazi ukuba kukho inyoka enetyhefu emva kwakhe. Ukubuya kuka mama wakhe ekhitshini esiya ebhedini ka Costa, wabona inyoka enobuhlungu isondela kumntwana wayo.
UJosileide da Silva Costa wayecinga ukuba sisiqwenga somdlalo, kodwa le nto wayeyithatha njengetheyipu yayiya kumntwana wakhe. Ngokunyakaza okukhawulezayo, ngokukhawuleza wasusa isandla sikaCosta ukumphepha ukulunywa yinyoka enetyhefu esindisa ubomi bakhe.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola oobawo ababengabalinganiswa beMidlalo
Akukho nto iphikayo kwinto yokuba ukucebisa kuncede abo banomdla kwibhola ekhatywayo ukuba babone ithemba ngaphakathi ngokwabo ngakumbi xa ababonisi bengabanye abantu kodwa ootata bendalo kwimentees.
Ngaphandle kokuqhubeka njengo-cliche njengotata, njengonyana, sinawo Thiago Alcantara owamlandela emva kukayise uMazinho. Ezinye zibandakanya USawule Niguez Onyathela ngeendlela zikayise u-Antonio Sergio Busquets owamiselwa emva kotata wakhe uCarlos. Ngaba lukhona olunye uhlobo lwelifa elilunge ngakumbi?
UTiago Alcantara, uSaul Niguez kunye noSergio Busquets ngoonyana kwiinganekwane zebhola. IiCredits zemifanekiso: LB.
Amabali obuntwana - Abadlali bebhola abaphumileyo esikolweni
Iqela lebhola ekhatywayo bambalwa aluzange lubenayo unyamezelo lokuba kunye nokuhlala phantsi bathathe imiyalelo kootitshala, ngelixa abanye bengazange baphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo njengoko imisebenzi yabo yebhola ekhatywayo inyuke ngendlela entle xa bekwishumi elivisayo.
Abadlali bebhola bayabandakanya iintsomi ezifana Pele, kunye nebhola ekhatywayo yaseBrazil eyayihambele phambili kunye nenxusa leBarcelona - URonaldinho. Ukuqhubela ezantsi kubadlali ngaphakathi kwiminyaka yobudala beminyaka-ngexesha lokubhala - sinokuthandwa Cristiano Ronaldo kunye neenkwenkwezi zeBarcelona - Lionel Messi abangakhange bayigqibe imfundo yesiqhelo.
URonaldinho, uMessi noPele babenemvelaphi engazinzanga yemfundo ngexesha lobuntwana. IiCredits zemifanekiso: LB.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola ekhatywayo abaphantse ukuyeka ukudlala
Kuyatshiwo ukuba xa kuhamba kunzima, ubunzima buhamba. Ukunyuka kuye kwaqinisekiswa ngokuhamba kweminyaka kuwo onke amabakala okuzama komntu ukuyeka ibhola. Ngapha koko, incede ekuqinisekiseni ukuba ilizwe aliphoswa kukufumana abadlali abangoochwephesha abanokuyeka kwakudala ngexesha lomsebenzi wabo wokwakha.
Akunabaninzi abayaziyo loo nto Wayne Rooney's uthando lwebhola luye lwahluka njengepakethe yamakhadi xa wayengumntwana oneminyaka eyi-14. Kwangokunjalo, ngekhe kubekho uyolo U-Ibrahimovich Kwibhola ekhatywayo ukuba khange athethe ngokuthanda ubomi kumazipho. Kwakhe, UAlisson Becker abazali baphantse bamkhupha kwibhola ekhatywayo ngenxa yokuba wayeqhubeka erekhoda ukukhula okucothayo kwinzalo nakwiminyaka ye-15.
U-Wayne Rooney omncinci kunye no-Ibrahimovich baphantse bayeka ukudlala ibhola. IiCredits zemifanekiso: LB.
Amabali obuntwana - Abadlali beBhola ekhatywayo AbaQalile Njengabadlali baseBalabala
Dynamics ligama elingafumaneki nje kwizicatshulwa zeFiziksi, ikwibala lebhola ekhatywayo lokuba umdlalo ukwinto yonke malunga neFiziksi. Yonke iqala ngenqanaba lokuqala eliphambili abathatha ibhola ekhatywayo besebancinci xa bethatha ibhola ngokuzonwabisa kwayo. Emva koko, babandakanyeka kwibhola ekhatywayo okanye baqhubeke nokuqeqeshwa kunye namaqela alapha kunye nezifundo zeeklabhu.
Ngelixa i-prodigies yebhola ikulo, bazanywa kwizikhundla ezahlukeneyo de indawo yabo eyomeleleyo okanye i-forte isungulwe. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba abanye babhadula kwiindawo ezikhuselayo bayokuma ngaphambili kurhwebo lwabo njengabahlaseli ngelixa abambalwa ababalulekileyo Thibaut Courtois Wabuya umva ekubeni ungumkhuseli waba ngumgcini webhola opheleleyo. Ngokufanayo, UDavid Gea wayengumdlali ngaphandle ngaphandle kokuba aziva esekhaya ngaphakathi komgangatho weposi.
UDavid Gea kunye noTibaut Courtois baqale baqeqeshwa njengabadlali bangaphandle ngaphambi kokuba babe ngamagoli. IiCredits zemifanekiso: LB.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda amaBali ethu aBantwana. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.